JINGHPAW KASA: နယ်ခြားမှတ်တိုင် (၆) အနီး တရုတ်စစ်အင်အား (၃၀၀) ကျော်ချထား
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ မြောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၁) အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်သော ပန်ဝါဒေသ ကချင်ပြည်နှင့် တရုတ်ပြည် နယ်ခြားမှတ်တိုင် (၆) သို့ တရုတ်အစိုးရမှ တရုတ်စစ်တပ် အင်းအား (၃၀၀) ကျော်ကို လာရောက်တပ်ချထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ တရုတ်အစိုးရမှ ယခုကဲ့သို့ နယ်ခြား မှတ်တိုင်သို့ စစ်အင်အား အများအပြာ လာရောက်ချထားရခြင်းမှာ ဗမာစစ်အစိုးရမှ ဒီဇင်ဘာလ (၅-၆) ရက်နေ့တို့တွင် စစ်ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များကို လာရောက် ပစ်ခတ်ရာ၊ ဗမာအစိုးရ စစ်ရဟတ်ယာဉ်များသည် တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းသို့ မီတာ (၈၀၀) ကျော်ဝင်ရောက်လာခြင်းနှင့် ဗမာစစ်အစိုးရ စစ်ရဟတ်ယာဉ်မှ ပစ်လွတ်လိုက်သော ဝေဟင်မှ မြေပြင်ပစ် ဒုံးလက်နက်များ တရုတ်နိုင်ငံ အတွင်သို့ ကျရောက်ပေါက်ကွဲခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ တရုတ်စစ်တပ်မှ နယ်ခြားမှတ်တိုင်အနီးတပ်စွဲထားသော တရုတ်စစ်တပ်မှ လေယာဉ်ပစ် လက်နက်ကြီးများကိုလည်း တပ်ဆင်ထားပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ဗမာအစိုးရ စစ်ရဟတ်ယာဉ်များ နယ်ကျော်လာပါက ပစ်ချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော် ကိုလည်း သတိပေးထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက် သိရှိရပါသည်။
More than (300) Chinese soldiers settled in Burma and China boarder post (6), it is under KIA (1st) Brigade area near Pang Wa, according to the KIA front-line officer report. Last December 5th and 6th, Burmese military helicopter shoot Kachin patriotic soldiers near the boundary, some missiles are arrived in 800m from the boundary and exploded in the China, thus Chinese troops settled near the boundary. And they carried heavy anti-air craft weapon and they warned the Burmese Government that they would fired if the Burmese military helicopter flies over to the China state, and they reminds to the Naypyidaw.
grai kaja sai law
Shanglawt Du kaba shalang kaba ni hpe hku hkau ai kadai nga ma ai kun......ya yang hpyen man kayin dat yang htuk manu na shadu ai nam de myen hpyenla nau law htu sai majaw gaw MKA na myen dap daju wa htim kasat zing dat yang hpyen man kayin dat ai hku kalaw lajang dat yang kaja dik ten re sai ngu mu ai law tsun ya marit.nre jang shawng lam na anhte myusha ni myen nau htu ai majaw hkrup mara gap bun ai majaw myusha ni gau ngwi ngwi si htum wa na tsang ra ai re.K.I.A hpyenla ni hpe shamyit ngut yang du ni hpe mung rim htau kau na mara ai.Myen gaw shi hte pawng tim nkaja ai hpe labau kaw yu yu ga.Thai hpe zing ai shaloi na labau hpe yu yu ga lo....
menye sha re
Myu Tso hpyenla hpu nau ni e, dai Myen niahelicopter hpe mu jang shanhte mung de bai n lu wa hkra gap jahkrat kau ya u. Sa ai, pyen ai hte yong gap ya rit. Dai jak nsen n kam madat dik nngai lo.
Re re helicopter dai maka n,kap nga....myen dai ni si mayu nga...shan the hpe mahtang shamyit kau ra kyu hpyi ai ngu ai laknak kaba hte